दूध बिक्री नभएपछि ट्याङ्करबाटै निःशुल्क बाँड्न थालियो ! «
दूध बिक्री नभएपछि ट्याङ्करबाटै निःशुल्क बाँड्न थालियो !
Published : 20 April, 2020 7:40 pm
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय बन्द हुँदा बजारमा कतिपय उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको छ ।आपूर्ति कम भएपछि वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ । तर, दूधको हकमा भने अवस्था उल्टो छ । दूधको बढी खपत हुने चिया पसल, होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, स्कुल बन्द भएपछि बिक्री ७० प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादित दूध बिक्री नभएपछि किसान र डेरी उद्योगहरूलाई के गर्ने भन्ने पिरलो छ ।